Faallo: Xaash xaashka xaawaleyda iyo xiisaha xukunka - Caasimada Online
Home Maqaalo Faallo: Xaash xaashka xaawaleyda iyo xiisaha xukunka
Faallo: Xaash xaashka xaawaleyda iyo xiisaha xukunka
Waa maqaal dheer oo dhinacyo badan taabanaya kana hadlaya sida ay dumarka Soomaaliyeed ugu Ooman yihiin in mar uun ay xil qabtaan, iyo culeyska ay leedahay in hooyada loo dhiibo shaqo dheeri ah maadaama ay heeyso shaqada guriga oo idil.
Hooyada ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay udub dhaxaadka jirtaanka Umadaha, waxaana caadiyan ay mararka qaar ka karti iyo wax qabad badan yihiin raga qaar, sidoo kale dumarka qaar ayaa ku siganaysaa in aad tiraahdaa Waxay tahay dhame la dhameeystiray taas oo dambi ah, madaama Nabigeen SCW uu sheegay in dhowr dumar oo kaliya la dhameystiray.
dadka qaar ayaa u famhi kara marka ay arkaan qaab qoraalka faaladeyda in aan ahay cunsuri cadka dumarka diidan, balse inta aadan kasha iska qaadan ogow ujeedkeyga, waxaan doonayaa inaan soo bandhigo sida dumarku ay u wanaagsan yihiin iyo qaabka loo dulmiyay.
marka hore waxaan si hufan u qaadaa dhigi doonaa dulmiga iyo sida uu noqon karo.
Waa Maxay Dulmi?
Dulmigu aragti ahaanteyda waxaan ku sharxi lahaa waa duudsiinta xaqa qofi leeyahay iyadoo la adeegsanayo qidad iyo taaktiko gooni ah, sidoo kale waa in aadan xaq u helin waxaad mudneeyd in aad xaq u hesho.
Si lamid ah dulmiga waxaa ku tilmaami karaa in uu yahay in lagu saaro waxaadan xaq u lahayn iyadoo ay jirto sabab kuu diideysa, waloow xitaa awood u yeelo in aad sameyso sheygaas.
Dulmiga caadiyan waxaa loo qeybin karaa aragti ahaanteyda Laba qeyb Oo ka ah Dulmi Toosan Iyo Mid Tiicsan, mararka qaar dunida waxaad arkaysaa inay dadka intoo badan dood ka keenaan dulmiga aan tooska ahayn hadana waan wadda sharxi doonaa marka lagaaro sadarada xiga.
Dulmiga Toosan: waa dulmiga sida bareerka ah uu u qasdo qofka daalimka ah ee wax dulminaya iyadoo uu ogyahay kana warqabo qofka madluumka ah ee la dulminayo, taas oo Ku dhacda laba qaab oo kaliya (1) Awood daro heysa qofka la dulminayo ama (2) liidmo iyo quursi uu u yeelayo qofka wax dulminaya ugu fiirsada falka uu sameeynayo, waxaase uu qofkan kaga duwan yahay kan hor wuu awoodaa in uu meel iska saaro hadana yasmo ayuu ugu fiirsanayaa.
Dulmigan waa mid kale oo kamid ah qeybaha dulmiga, kan wuxuu kaga duwan yahay kii aan horey usoo aragnay, dabcan daalimka ama qofka wax dulmiya ayaa u muujiya la dulmiyaha qaab wanaagsan kaas oo uu ku aqbali karo dulmiga iyo daalinka loo dhigay.
Taas oo keenta in sunta looga dhigo saliid caadi ah oo sixin ah, islamarkaana uu ku mamao kaliya waxa uu u sheego qofka dulminaya, caadiyan inta badan noolaha Madawga ah kuma baraarugsano qaab gumeysiga Nuucan oo kale.
Horaan bey soomaalidu ugu maah maaheen “Gaal Meeshuu Geel marsiin rabo Cirbad Buu Galiyaa,”, sidaa darteeda dabuubta qoraalkeyga waxaan kala jeeda fidrada hooyada waa in ay mas’uul ka noqotaa Jikada iyo inta ku xeyndhaaban, dad badan baa dood ka keenaya arainkaas, balse anagoo dabaqeena sharaxaadii aan horey usoo xusay.
In la iskaa daro howl guri iyo mid guud islamarkaana ay kuu wehliso waxyaabaha dheeriga ah sida dhalmada, dhiiga caadada, cudurada caadiga ah oo ay dumarka kaga nugul yihiin raga intiisa kale hadana hadana adiga oo intaas dhibaato ku haysato laguu amaano in aad xil dheeri ah raadiso ma cadaalad daro mise cadaalad, jawaabtu waxay ahaan doontaa dhankiina.
Dadka qaar ayaa ku dooda in dumarku ay labaduba kasoo bixi karaa, ma diidanise in ay ka wanaagsan yihiin laba dhig dhig kamid ah raga oo ay ka bixi karaan howshaas iyo wax lamid ah, kaliya waxaan doonayaa in aad ila garataan bar socodka qoraalkeeyga oo ah kaliya in hadii ay sameyso xitaa sida ay tahay dulmane dulmigeeda loo amaanay iyana xadro iyo xiskeeduba siisay xil.
Indheer garadnimadu ma ahan darajo ay dad bixiyaan, dadka barkiisa ayaa aaminsan in howsha guriga loo qabanayo, hadii ay tahay aragtidaas mid kula saxan, Balse ma ku waydiin karaana Su’aal “Islaantu marka ay gurigeeda maamulan waydo maxaa lagu abaal mariyaa,” Hadii ay jawaabtaadu tahay Furiin iyo Fore Ganjeelo, maxaa diiday Islaan diiday in ay ciyaalkeeda dhex fadhiso in la furo oo ka dhigay amaan in Hooyadu guriga ka maqnaato ciyaalkana ay koriso jaariyad wax waliba laga fili karo.
Hadii uu diido qofka in uu fadhiyo guriga waxaa ka dhalan karta in ay isku dhacaan seygeeda oo aan raali mararka qaar uga noqon karin in islaantiisa ay magaalada ay Caraweelo ka noqoto oo raga ay hor fadhiisato.
Doqonimada dadka iyo duliga uma sina dadku, shaqsiyaad qaar baa aaminsan in ay taranka iska joojinayso inta ay ku jirto siyaasada, taas ayaa ka daran wax waliba madaama aad waajib samaawi ah aad u kansashay wax adiga kuu gaar ah, waxaana aad ku muteysan kartaa cadaab xanuun badan hadii aadan ka towba keenin, madaama ay tahay qalad wayn oo ay galaan dadka Indhow garadka ah.
Ma Guursan Lahayd Naag Lagula Qabo
Waxaan umaleeyaa in aysan ku jirin dooqaaga in aad guursato Naag lagula qabo, waxaana kala jeedaa uma ogolid islaantaada in ay la hadasho islamarkaana la kaftanto qof aan adiga ahayn ma aadan u ogayn.
Waa qasab ayeey tahay in ay noqoto ugu yaraan qof hadal badan, ma u dhaw raga kale taas oo aan adiga kuu cuntamayn, waxaana mudan in aad ilmahaaga hooyadooda aad hubisaa inta aadan guursan si ay kugu noqdaan kuwa kuwax tara.
Waxaa caada ah in ay ka qeyb galeyso shirar kala duwan oo ka dhacaya meela kala duwan oo dunida ah, waxaad ku qasban tahay inaad dirto adiga oo aan hubin islamarkaana aan la socon xaaladaheeda ugu dambeya, hadii aad tahay qof hinaasaha la dhashayna waxaan kaala talinayaa inaad guursato naagaha lagula qabo kaliya ma ahan siyaasiyiinta dumarka ah sidoo kale waxaa soo galaya wariyayaasha, fanaaniinta iyo dumarkale oo dibad yaal ah.
waxaan dabuubta hadalkayga kusoo gabagabeynayaa raali galin aan ka bixinayo wax waliba oo aad u aragtay in ay ahaayeen qalad inta aad aqrinaysay faaladan, haba ugu badnaadee mowduuc yarihii ugu dambeyay ee aan kaga hadlaynay Guurka naagaha dibad yaalka ah.
Waxaa Diyaariyay Cabdi Wahaab Axmed Cali